ပိုက်ကွန်ယက်မှ ထိုးဖောက်ရုန်းထွက်လိုက်ပါ - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
စောင်မမှုနှင့် မတ္တာအတွက် မစ်ရှင်လုပ်ဆောင်ချက်
ကိုယ်တိုင် ပြုစု ပျိုးထောင်သူတစ်ဦးသည် ချီးမြှောက်ပေးသူ မည်သူမျှမရှိလင့်ကစား ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးကို အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို မွေးဖွားကတည်းက လွန်ခဲ့သော နှစ် 20 ကာလအတွက် အခြားသူများ ကို စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဤမေတ္တာတရား ပျံ့နှံ့စေရန် တာဝန်ရှိခဲ့သည်ဟု ခံစားရပါသည်။ ဤမေတ္တာတရား၏ တန်ဖိုးကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အထုံတစ်ခု မျှဝေသူ တစ်ယောက်စီတိုင်းအတွက်ပေးအပ်ရန် ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ် ဘဝ၏ မစ်ရှင်လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ုပ်၏ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ .
ဒုတိယအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်သည်ပြသာနာ အခက်အခဲများကို မကြောက်ရွံ့ပါ။ အနှောင့်အယှက်များ ရှိသည့်အခါတိုင်း ၎င်းတို့အပေါ် ထပ်ခါထပ်ခါ တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှ အဟန့်အတား အားလုံးကသာလျှင် ကျွန်ုပ်ကို အဆင့်မြင့်နေရာများသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်ပါသည်။ အနှောင့်အယှက် တစ်ခုကို တွေ့ကြုံကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပြီး ဤသို့ကျော်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် ပိုမို ခိုင်မာလာပါသည်။ .
နာကျင်မှုသည် မျှော်လင့်ချက်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပြီး သင်တို့ကို ကြီးထွားစေပါသည်
ကျွန်ုပ်သည် ခွေးငယ်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ခုံတန်းရှည်ကဲ့သို့ ကျာက်ဆောင် (သို့) ရကာတာကြီး တစ်ခုနှင့် တွ့ကြုံလျှင် ဘာလုပ်မလဲ။ အပေါ်က ခုန်သွားပါ။ အဟန့်အတားသည် ပိုမိုကြီးမားများပြားသည့်အခါ ဘာလုပ်မလဲ။ အခက်အခဲကို လွယ်ကူစွာ ရှင်းလင်းနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်ကိုယ် ကျွန်ုပ်အစွမ်းမြှင့်ရန် မိမိကိုယ်ကိုယ် အားတင်းလုပ်ဆောင်ပါမည်။ ၎င်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပာဆိုခြင်းထက် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်၊ လုပ်ငန်းစဉ် သည် နာကျင်မှုရှိပါသည်။ သို့သော် နာကျင်မှုသည် မျှော်လင့်ချက်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်ကို ကြီးထွား စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ ကျွန်ုပ်သည် အနှောင့်အယှက်များကို နှစ်သက်လာပါသည်။ .
ဒုက္ခဝေဒနာများကို သုခပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုအဖြစ် လွှဲပြောင်းပါ
အနှောင့်အယှက်ပြုနေသည့် လူ (သို့) အရာဝတ္တုများဖြစ်စေ စိန်ခေါ်မှုအတွက် ပျော်ရွှင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ပျော်ရွှင်မှုသုခသည် ကျွန်ုပ်ဖော်ဆောင်ရေး နောက်လိုက်သူအားလုံးကို ကူညီပေးသည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အခက်အခဲများနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်။ အရာခပ်သိမ်းကို ရွှင်ပြနှလုံးဖြင့် လက်ခံပြီး ပြသာနာများကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။ ဤအရာသည် အမှန်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ .
မှန်ကန်သည့် လမ်းကို ရွေးပါ
ကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေမျိုးတစ်ဦးအဖြစ် ခံစားရသူ နောက်လိုက်တက်ရောက်လာသူအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်၏ နောက်ဆုံး အသိပေးချက်သည် အောက်ပါတို့အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ .
ယခု နားလည်သဘောပေါက်သလား။ ဤအရာသည် သွားရမည့်လမ်းကို ရွေးရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ အမှန်တရား ကို သဘောပေါက်ပြီးသည့်အခါ မှန်ကန်သည့်လမ်းကို ရွေးပါ။ လမ်းဟောင်းနောက်သို့ မလိုက်ပါနှင့်။ လမ်းဟောင်းသည် ကျဉ်းမြောင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်၊ မည်းမှောင်ပြီး အတွင်း၌ ပိတ်နေပါသည်။ ဤလမ်း သည် သဏ္ဌာန်တူနိုင်သော်လည်း သင့်ကို နောက်ထပ်အမှားများဆီသို့ ဦးဆောင်စေပါမည်။ .
ပိုကောင်းသည့် လမ်းနောက်သို့ ရဲဝံ့စွာလိုက်ပါ
ယနေ့ သင်သည် တောက်ပမှုအရှိဆုံး အံ့ဖွယ် လမ်းမကို တွေ့ရှိလိုက်ပြီဟုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် သဏ္ဌာန်မတူနိုင်သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး တောက်ပသည့် လမ်းသစ်ကို ရဲဝံ့စွာ လိုက် လျှောက်ပါ။ ၎င်းလမ်းကို ဖြတ်လျှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အခါ လမ်းအတိုင်းသာ လိုက်သွားပါ။ ဤအရာကို ပြုလုပ်မှသာလျှင် သင့်ကို အောင်မြင်စေနိုင်ပါသည်။ .
ကိုယ်တိုင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး လမ်း
ကိုယ်တိုင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးလမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်သည့် အရာဝတ္တုများသည် သာမန် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအတွက် ညစ်ပတ်သည်၊ နိမ့်ကျသည်သို့မဟုတ် မဖြစ်စလောက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤထင်မြင် ချက်သည် အရေးမကြီးပါ။
နိမ့်ကျမှု (သို့) မဖြစ်စလောက် ထင်မြင်ခံစားမှုသည် သင်၏ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခံစားချက်မှ ဆင်းသက်လာပါ သည်။ နေအိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ် မြင့်မြတ် ဂုဏ်ရှိမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် လူတိုင်းကို ဝန်ဆောင် ပေးပါသည်၊ ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ် ကျန်းမာသည်ဟု ပေါ်လွင်စေပါသည်၊ ၎င်းက မကောင်ပေဘူးလား! ရေချိုးခန်း သန့်ရှင်းနေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန် အခွင့်အလမ်း အကျိုးတရားကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ .
ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိနိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် မည်သည့်နေရာသို့ သွားသည် ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်ပြီး အေးချမ်းမည်ဖြစ်သည်။.
သာမန် သဘာဝအနေအထားအကျဆုံး ဘဝ မဟုတ်ပေဘူးလား။ ?
ဤအရာသည် နှလုံးသား၏ ရဲရင့်မှုဖြစ်သည်။ ကာယဗလ၊ ခေါင်းစွပ်၊ လက်နက်များ မပါရှိပါ။ သို့သော် ခွန်အား ကောင်း ပါရှိပါသည်။ ကြီးမြတ်သည့်နှလုံးသား၊ ကြံ့ခိုင်သည့်နှလုံးသားသည် နှလုံးလှသည့်အရာနှင့် ကာကွယ် ရေး အလွှာများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကမ္ဘာလောကကြီးကို ရင်ဆိုင်ပေးပါသည်။ ဤအရာ သည် ကရုဏာ၊ မတ္တာ-ကြင်နာမှု၊ အစွမ်းထက် ကျယ်ပြန့်သည့် စိတ်စွမ်းအင်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် သဘာဝအနေအထားအကျဆုံး ဘဝဖြစ်ပါသည်။.
ဗောဓိ နည်းနာဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက်ဆိုတာ
Grandmaster JinBodhi World
Grandmaster JinBodhi English
Grandmaster JinBodhi Korea